Sababta Loo Beegsaday Madaxweynihii Haiti Ee Soo Da-dajisay Khaarajint...
Port-au-Prince (Wararka Maanta) – Waxaa isa-soo taraya xogaha laga helayo dilkii khaarajinta ahaa ee loo geystay madaxweynihii dalka Haiti, Jovel Moise oo Arbacadii ka dhacay guri khaas ah oo uu deganaa, abaare 1:00 Am ee xilliga Haiti.
Sida la shaaciyey ilaa hadda falkaas ayaa waxaa fuliyey koox howl-gab ka noqotay ciidamada Colombia iyo Laba nin oo la rumeysan yahay inay yihiin Mareykan, oo mid ka mid ah uu waardiye ka ahaan jiray safaaradda Canada ee Port-au-Prince.
Mathias Pierre, oo ah wasiirka doorashooyinka Haiti, ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in mid ka mid ah raggaas Mareykanka ah lagu kala magacaabo James Solages iyo Joseph Vincent.
Labada nine e Mareykanka ah ayaa la sheegay inay asal ahaan kasoo jeedaan Haiti, waxayna ka mid yihiin 26 qof oo loo xiray dilka madaxweyne Moise oo aroortii Arbacada ka dhacay gurigiisa gaarka ah.
Haddaba, Maxaa soo da-dajiyey shirqoolka lagu khaarajiyey madaxweynihii Haiti?
Ra’iisul wasaaraha KMG ah ee Haiti, Claude Joseph ayaa sheegay in madaxweyne Moise loo beegsaday arrimo la xiriiray la dagaalankiisa kooxaha qaska ka wada dalkaas, hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in beegsigiisa ay ka dmabeyso siyaasad, maadaama uu Moise xilka isku dhajiyey.
Moise, oo aan taageero badan haysan ayaa Haiti oo ah dalka ugu saboolsan Latin America, ku xukumayey dikreeto kadib markii doorashooyinkii sharci-dejinta ee lagu waday inay dhacaan 2018 dib loo dhigay, kadibna uu diiday inuu doorasho qabto.
Haiti oo ah dal ku yaalla Caribbean-ka, oo xuduud la leeyahay dalka Dominican Republic, halka dhanka baddana uu ugu dhow yahay dalalka Cuba iyo Jamaica, ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka taagna rabshado xoogan.
Kadib markii uu baahay warka ku saabsan dilka, waxaa xiligaas rasaas xoogan laga maqlayey qeybo badan oo kamid ah magaalada caasimadda ah ee Port-au-Prince, oo bilihii dhowaa ay ka jireen rabshado xooggan, ayaga oo ay ku dagaalamayeen booliska iyo burcad hubeysan.
Wararka Maanta : Daawo: Beesha ay kasoo jeedo Ikraan Tahliil Faarax oo war cusub soo sa...